Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Oromia Shall be Free |
bilisummaa May 21, 2017	1 Comment
Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu Oromoon uumaman:
Rakkoon jiru maali?
Asirratti, rakkoon jiru maali? jedhee gaafii kanan dhiyeesseef waan naaf hin galletu jira. Kanaafan dhimma kanarratti yaada koo dhiyeessuuf mata duree kana filadhe. Akkuma miidiyaalee hawaasaa tokko tokkorraa hubatamutti, erga GGOn ijaaramee asis ta’ee sana duras dhaabbatni kun lamaan akka waan walfaallessaniitti yookaanis kaayyoo adda addaa qabaniitti; sana birallee dabree akka gufuu walitti ta’uuf deemaniitti ilaalama. Ijaaramuu GGOtiif affeerraa fi yaamicha godhameef diduudhaan jaarmayootni Oromoo tokko tokkos ibsa baasanii akka turanis mul’atee jira. Warri GGO ijaaranis yaamicha OLC irratti argamuuf fedhii akka hin qabnes ibsamee jira. Erga hunduu waayee uummata keenyaatiif quuqamanii; erga hunduu sochii uummata keenyaatiif tumsa fi gargaarsa ta’uuf kaayyoo qabaatanii; erga hunduu diina waloo kuffisuuf waan danda’amu ni goona jedhanii murteeffatanii; erga hunduu ilmaan Oromoo – ilmaan haadha fi abbaa tokkoo ta’anii; rakkoon asirratti uumame ykn uumamu maali?
Wanti qabatamaa ta’ee fi ragaa hin qabne tokko otuu hin jiraatin ykn hin mul’atin, gama tokkoon, warri OLC kaayyoo walabummaa Oromiyaa karaarraa maqsuuf; sochii uummata keenya kan biyya keessaa kanatti abbaa ta’anii kaayyoo ofii tokko galiidhaan gahuuf warra hojjetanii dha jedhama. Gama biraatiin ammoo, GGOn warra garee tokkotti hirkatan ykn garee tokkoon ijaaramanii dha jedhamee haasa’ama. Gareen jedhamu kunis akka hubatamutti ABO warra Obboo Daawud Ibsaatiin hogganamu, kan yeroo baay’ee “Shanee”dhaan yaamamanii dha. Egaa, asirratti ololli gama lamaan deemu kun eessaa dhufe? Dhuggumatti dhaabbatni kun lamaan, OLC fi GGOn, kaayyoo walfaallessan qabuu? Akka waliin hin hojjetne kan isaan taasisu rakkoon hin beekamne jiraa? Maaliif yaamicha waliif godhan kabajuu dhiisan? Maaliif dhaabbata tokko waliin ijaaruu dhiisanii gara garatti uumaman? fi gaafiileen kana fakkaatan ka’uu danda’u.
Gaafiilee kaan akkuma jiranitti dhiisee, mee gaafii isa duraa: Ololli gama lamaan deemu kun eessaa dhufe? kan jedhu irratti yaada tokko tokko dhiyeessuun yaala. Ani akka hubannoo kiyyaatitti, Oromoota garee adda addaatti baaseen ilaala.
Tokkoffaa: Sabboontota warra Oroummaadhaan bilchaatan; kan uummata ykn/fi saba Oromootiif quuqaman garuu gama siyaasaatiin tooftaa fi tarsiimoof jedhamees haa ta’u kan walabummaa Oromiyaa ijaaruutti hin xiyyeeffanne; gaafiin Oromoo walfaanummaa Itoophiyaa sana keessatti deebii argachuu ni danda’a jedhanii warra amanan;
Lammaffaa: Sabboontota warra walabummaa Oromiyaa malee uummata Oromootiif furmaatni xumuraa (lasting solution) argamuu hin danda’u jedhanii amananii fi galii kanaaf hojjetan ykn qabsaa’an;
Sadaffaa: Oromoota kan hubannoo siyaasaa fi dammaqinsa gahaa hin qabne; karaa siyaasaatiin isa kamtu Oromoof gaarii akka ta’u ykn hin taane addaan baasanii hubachuu hin dandeenye; kan olola deemuu fi afaanfaajjiidhaaf saaxilaman; kan ijjannoo murtaaye tokko hin qabne fi k.k.f;
Afraffaa: Oromoota karaalee adda addaatiin diinotaaf hojjetan ykn diinota jala kaatanii isaan tajaajilan yommu ta’an, isaan kun yookaan dammaqinsa fi bilchina Oromummaa warra hin qabne yookaanis ammoo fedhii dhuunfaatiif jedhanii, warra uummata ofii gananii diinaaf meeshaa ta’an;
Shanaffaa: Oromoota warra sirumaayyuu dhimma tokko keessallee galuu hin barbaadne fi cillisanii jiruu dhuunfaa jiraachuu filatan; kan qabsoo kana keessatti gahee tokkollee hin taphanne fi qooda tokkollee hin gumaachine dha
Gareelee Oromoo armaan olitti tarreeffaman kanaa ala ammoo warri Afaan Oromoo sirriitti beekan garuu dhalootaan ykn dhiigaa fi fooniin Oromoo hin taane; maqaa Oromoo moggaafatanii dhimma Oromoo dubbachuu fi barreessuu irratti gahee guddaa taphachaa jiraniis jiru. Isaan akkanaa kuni fi Oromootni garee afraffaa keessa jiran warra dhimma Oromoorratti halkanii guyyaa olola hin qabatamne garuu akkaataa nama amansiisuun ykn afaanfaajjesuun uummata keenya sammuu naannessaa jiranii dha jedheen yaada, amanas.
Sabboontotni Oromoo keessa keessatti rakkoo walirraa qabaatanillee; waan tokko tokkorratti waliigalteen dhabamullee; erga uummata Oromootiif bu’aa tokko ni fidna jedhanii; wanti olola hin taane walirratti oofaniif sabani ni jiraata jedhee hin yaadu. Keessumaayuu yeroo ammaa kana keessatti diinatti xiyyeeffachuu dhiisanii walitti xiyyeeffachuun Sabbontota keenyarraa ni eegama jedhee yaaduun na rakkisa. Sababni isaan walitti mufachiisuu danda’u ykn malu olola garee biraatiin faca’u ta’uu danda’a jedheen yaada. Haa ta’u malee, olola akkanaatiif gurra kennuun dadhabbina guddaa dha; waan dabrerraa barachuu dadhabuu dha. Haala uummatani keenya keessa jiru dagachuu dha. Kuni ammoo sochii biyya keessatti deemaa jirutti gufuu ta’ee; qabaneessee diinni yeroo akka bitatu taasisa malee faayidaa hin qabu. Dhugaan kun hunda birattuu sirriitti hubatamuu qaba.
Sabboonaa ta’ee Oromoon walabummaa Oromiyaa hin hawwine ni jira jedhee hin yaadu. Haa ta’u malee, galiin yeroo dheeraa akkuma jirutti ta’ee, har’a Oromoon hunduu kan hatattamaan irratti hojjechuu qaban kaayyoo yeroo gabaabaa ta’uu qaba. Innis Wayyaanee nama-nyaataa kana hundeedhaa buqqisanii; uummatni keenya bilisummaadhaan hiree ofii akka murteeffatu taasisuu dha. Isa kanarratti asii fi achi jechuun hin jiru. Kanaafuu, kaayyoo ykn galii yeroo gabaabaa fi dheeraa jennee wal sakaaluurra tumsa waliif ta’anii diinarratti xiyyeeffachuun dirqama Oromummaa ti. Silaa akka hawwii kiyyaa otuu ta’ee; akkan yeroo baay’ee barreessaa turetti tokkummaa qabsaa’otaa fi jaarmayoota keenyaatu humna jabaa uumuu danda’a ture. Garuu tokkummaan ani hawwu sun milkaayuu waan danda’u natti hin fakkaatu.
Jaarmayootni keenya walittibaqanii tokko ta’uu yoo hin dandeenye; Sabboontoni keenya dhaabbata ykn dhaaba tokko keessatti wal ijaaruun rakkisaa yoo ta’e, gara gara taa’anii gufuu walitti ta’uu dhiisanii waan waliin hojjechuu danda’anirratti tumsa waliif ta’uun qabsoo keenyaaf gargaarsa guddaa dha. Kanaafuu, akka ilma Oromoo tokkootti dhaamsi ani dabarfachuu barbaadu; ilaaf ilaamee aadaa keenyaa bu’ura godhachuudhaan rakkoolee xixiqqoo jidduu jirtu akka aadaa Oromoo fi sirna Gadaatti furachuudhaan akka waliin hojjetan OLC fi GGO dhaaf dhaamsa Oromummaa dabarsuun barbaada. Isaan lamaanuu qabeenya Oromoo ti, lamaanuu Oromoof uumaman, lamaanuu beektotaa fi hayyoota Oromootiin ijaarman. Isaan lamaanuu diinni walqixxummaadhaan ittixiyyeeffata; isaan lamaanuu xiyyeeffannaa ololaa ti. Oromummaaf jedhanii waliigaluu qabu; waliigalteen yoo jiraate, tokkummaatu uumama; yoo tokkummaan jiraate, humnatu jabaata; yoo humni jabaate, injfannootu argama; yoo injifanne ABBAA BIYYAA ta’uu dandeenya.
Previous Wajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa’imman Godinaa Hararge Baha.
Next “Miidiyaan dhugaa ONN jedha Pro. Asaffaa Jaalataa”
Dubbistoota barreeffama kiyyaa kabajamoo,
Yaa’ii Hoggantoota Oromoo kan jedhu Yaa’ii “HOGGANSA” Oromoo jedhamee akka dubbifamu dhiifama wajjin isin gaafadha.